Khám phá 255 bài thơ hay về tình bạn tri kỉ lay động triệu trái tim | Anybook.vn - Anybook
Khám phá 255 bài thơ hay về tình bạn tri kỉ lay động triệu trái tim | Anybook.vn
Articles tononkalo tsara momba ny finamanana soulmate azo antoka fa hampihetsi-po anao sy hankasitraka ny namanao mahafinaritra. Amin’ity fiainana ity dia mila manana namana marina foana isika fa tsy ny rehetra no manana izany vintana izany. Ny namana tsara dia olona izay eo anilantsika mandrakariva hizara ny fifaliana sy ny alahelon’ny fiainana, indraindray adala nefa miahy antsika mandrakariva. Ndao hiaraka hahatsapa ireto tononkalo mahafinaritra momba ny finamanana ireto!
Ny tononkalo tsara momba ny finamanana amin’ny fanahy dia toerana mahazatra ho an’ny tanora hamerina hijery ny fahatsiarovana taloha ary hisaotra mangina ilay namana izay niaraka taminay foana. Raha manana tena namana ianao dia ankafizo fa tena faly ianao! Andao hiara-hitady tononkalo momba ny finamanana!
Inona no fitiavana tsara kokoa noho ny fisakaizana?
Andao hifampizara fifaliana sy alahelo
N’aiza n’aiza misy antsika
Mandefa ny fony foana ny namantsika.
Miantso foana ianao! rehefa nitomany aho
Na rehefa tsy milamina ny fo
Ny fananana ahy eo anilanao dia mamaha olana
Soraty ny fihetseham-ponao manokana.
Antsoy na dia lavitra aza
Vonona hiara hitomany izahay
Mizarà fihetseham-po kenda be dia be
Raha mbola afaka amin’ny alahelo be dia be ianao!
Aza maika hitaraina
Satria fanamby mangidy ny fiainana
Malahelo ianao, ho eo anilanao aho
Aza avela hisy hanenina mihitsy
Ny namana no seranan’ny fitiavana
Manampy anao hatanjaka foana
Esory ny fahoriana ry mpanjaka alahelo..veloma!
Feno fahasahiranana sy fahasahiranana ny dian’ny fiainana
Aza manondrika ny lohanao mangina irery
Ndao hifanome tanana hifampizara
Ny hozatra kely dia manamaivana ny enta-mavesatra eo amin’ny soroka.
Satria ny fiainana tsy mahalala ny ampitso
Koa andao hiara-hiasa isika anio
Mizara ny mamy sy ny mangidy isika
Mba hifanampiana mafy amin’ny fiainana.
Andao hiara-mitsangana ry namako
Ry namako malala amin’ny fiainako
Raha omeo firariantsoa arivo aho
Manantena aho fa haharitra mandrakizay ny fisakaizanay.
Andeha hovonjena ny fisakaizana
Ao am-po sy lalina ao amin’ny subconscient
Na dia lavitra aza ny lanitra rahampitso
Fotoana alahelo hahazoana fahatsiarovana mahafaly.
Raha malahelo ianao dia miankina amin’ny soroko
Mitomany, mitomany kely mba hanamaivanana
Amin’ny maha-olombelona dia matanjaka foana ny olona iray
Raha azo atao dia lazao amiko.
Mety ho levona ny alahelo rehetra
Ny fanaintainana rehetra aloha sy aorian’izay dia hanampy
Mitsangàna raha mbola miaina aho
Aza avela hanakana ny ho avy izany.
Feno fandrika sy tsilo ny lalan’ny fiainana
Raha sendra fahasahiranana ianao dia aleo mijanona ary mizara
Aza matahotra ny ho irery
Sambatra na alahelo, tsy afaka manadino.
Mba ho namana tsara dia tsy maintsy miaina toy izao ianao
Na manankarena na mahantra, maharitra mandrakizay ny fisakaizana
Ny tsara na ny ratsy dia tsy misy dikany mihitsy
Aoka ho madio toy ny fitaratra ny fisakaizana!
Firy taona no tsy nifankahita
Ny namako akaiky fony aho mbola kely
Adinonao angamba..fa mbola tadidiko
Tsy hohadinoina mihitsy ny fahatsiarovana ny fotoana iray
Firy taona no lasa noho ny fiainana mitsingevana
Na dia mifanalavitra aza isika.. ny anaranao dia mbola antsoiko ihany
Rehefa manirery ao amin’ny tanàna be olona
Ilay zazalahy mahantra tao amin’ny tafon’ilay tanàna taloha
Tsarovy… tamin’ireo andro nisian’ny orana
Niboridana raha vao nandatsaka voa ny lanitra
Mihomehy izy roa rehefa manahy sy mikiakiaka i Neny
Ny orana voalohany amin’ny vanim-potoana dia hanala ny aretina
Taorian’ireo taona rehetra ireo dia naniry foana aho
Na dia eo amin’ny antsasa-dalana aza izao tontolo izao,
Hifankahita indray izaho sy ianao
Mipetraha sy mifampiresaka mba hanangonana fotoana.
READ Thơ Tình Hoa Phượng - 18+ Chùm Thơ Hay Về Hoa Phượng Vĩ Ngày Hạ | Anybook.vn
Raha rahampitso rehefa mihidy ny vavahadin-tsekoly
Ny aloky ny namana malala dia mihovotrovotra
Feno tafio-drivotra ny lalan’ny fiainana
Fahatsiarovana taloha ary io no sora-tanana
Raha ho vovoka aho rahampitso
Koa, ry rivotra ô, aza esorina aho
Aoka ho maina mandrakizay any an-efitra aho;
Ary tsy nahy nanatri-maso ny fisarahana
Rehefa misaraka ianao dia aza adino ny momba anao
Na mitomany ianao na mihomehy dia mitovy ihany
Hihaona indray ny tany boribory
Miandrandra ny andro izay tsy ho levona ny fisakaizana
Nihalehibe tamin’ny fahazazako aho
Miaraka amin’ny lalan’ny bisikileta tsy mety sasatra
Tolakandro “tsy zaka malefaka”.
Ny anarana dia toy ny voasokitra amin’ny loha
Nihevitra aho fa efa nihalehibe hatry ny ela
Nahoana ianao no manonofy ny fahazazana rehefa lehibe ianao?
Fiakarana tamarinina tsy manan-tsiny, maka voay
Toy ny mari-pamantarana ny fiainana
Tahaka ny olona lavitra aho
Mitsimpona ny taloha, mivondrona amin’ny zava-misy
Manaova fanazaran-tena amin’ny maha-olombelona
Mianara mijery ny fiainana feno fiantrana toy ny zaza
Ilay zazavavy kely manana randrana roa taloha
Jereo foana aho (mampihomehy!) matotra
Nanadino zavatra ve aho?
Trano mamelona nofy
Tantaran’ny alin’ny orana izay niafarany tsy nampoizina
Lalao tsy misy farany amin’ny fasika
Afon-dasy alina lehilahy, mpihira
Andron’ny diplaoman’ny ranomaso…
Aiza no halehako, ho aiza aho?
Mahatsiaro ho kely kokoa noho ilay tovovavy manana randrana roa koa aho
Tsarovy ny fahazazako ka mitomany
Rano masira sy marikivy ny tanindrazako
Ny tanànako dia tany be vato voasaina
Vahiny amiko izy indraindray
Ny lanitra aza mifankahita.
Basy amin’ny basy, loha amin’ny lohany
Alina mangatsiaka miaraka amin’ny bodofotsy mitovy amin’ny mpivady fanahy
Ny saha alefako ny namako tsara indrindra ho angady
Ny trano dia tsy mamela ny rivotra hihorohoro
Ny ankamaroan’ny rano tany am-boalohany dia tsy manana miaramila.
Izaho sy ianao dia mahafantatra ny hatsiaka rehetra,
Tazo, mangovitra, tsemboka ny handriny.
Rovitra teo an-tsoroka ny lobako
Misy paty ny patalohako
tsy misy kiraro
Fihazonana tanana maromaro naratra!
Anio alina, ala mikitroka zavona
Mijoro mifanila miandry ny fahatongavan’ny fahavalo
Basy volana mihantona.
Divay sarobidy zarao amiko ny vera.
Mafana sy mangatsiaka eo amin’ny fiainana.
Mifanaraka amin’ny namanay dia miara-misotro izahay.
Reunion fraternity kapoaka lany nohosorana.
Raha manina ny ampitso ianao dia ho toy ny adala
Azafady, aza mieritreritra fa mitsingevana ny voninkazo.
Ralehilahy, tsarovy ho ahy.
Ny dikan’ny fitiavana lalina dia teny iray ihany.
READ Chùm thơ Hoa Gạo hay, tình thơ hoa gạo tháng 3 mới nhất | Anybook.vn
Toy ny majika ny fisakaizana
Ampio izahay hifandray akaiky kokoa amin’ny fiainana
Mandehana mandehandeha miaraka aminao
Asio tsiky mahafinaritra foana ny tavanao
Faly mihaona aminao ry namako
Mihomehy sy mivazivazy am-pilaminana
Esory ny alahelo mba hahazoana finoana
Mitadiava fisakaizana akaiky amin’ny tara-masoandro
Nitombo ny fahafinaretana
Rehefa tsy voazarazara ho kanosa ny namana tsara tarehy…
Ny tononkalo tsara momba ny fisakaizana fohy dia mamela fahatsapana lalina ao am-pon’ny mpamaky. Ny famakiana tononkalo mirakitra fihetseham-po maro dia hampihetsi-po antsika mafy. Andao hiaraka hahatsapa ireto tononkalo mahafinaritra momba ny fisakaizana misy dikany ireto!
– Volana dia lasa ny taona. NAMANA
Feno fahatsiarovana mahafinaritra koa
Taratasy nosoratana maika tamin’ny faran’ny tolakandro
Apetraho eo am-baravarana izany, miandry ny fiverenan’ny olona hamaky azy
Ao amin’ny nofy dia tsy irery isika
Ny fananana namana akaiky eo anilanao dia manana nofinofy mitovy
Andeha isika hiresaka momba ny fotoana… tsy manan-tsiny
Andeha hojerentsika ny zavatra adala be dia be
Ndao hifampitantara tsy misy farany
Momba ny fitiavana mitsimoka ato am-poko
Ary imbetsaka aho dia nangina tampoka
Mipetraha toy izany fotsiny mandra-piposahan’ny masoandro tolakandro
Ry havana malala, na dia any amin’ny toerana lavitra aza
Tsy nahita anao nandao ahy mihitsy aho
Rehefa faly aho dia reko koa ny fihomehezanao
Rehefa maharary aho dia mijery ny varavarankely
Hafatra manidina eo amin’ny tolàm-baravarana
Tehina aho, ka tehina
Faly ny foko mihaino
Teny mangina alefanao miaraka amin’ny eritreritrao
Mahery noho ny fitiavana ve ny fisakaizana?
Tsy misy fitiavana, adala amin’ny fanahy
Aza adino ny filentehan’ny volory volomparasy maizina
Tsy mampirehitra afo ny takolany
Trano tsy mihidy ny fisakaizana
Misalasala ve ianao hiditra?
Mafana ary mandehana indray
Ny lalana lavitra hahitana ny fahasambaranao…
– Nanana andro tsy nisy fialofana aho
Satria manana alahelo tsy manam-pahataperana io fanahy io
Mamirapiratra ny masoandro fa manirery ny foko
Miafina na aiza na aiza misy ny hatsiaka manodidina
Soa ihany fa mbola misy toerana azo antoka
Na ny fianakaviana aza
Namana fotsiny io
Rahalahy malala-tanana sy be fitiavana
Teny torohevitra, fehezanteny fampiononana
Malemy toy ny aloky ny andohalambo maitso
Niondrika aho ary noraisiko mafy ny tadin-kiraro
Matoky kokoa noho ny firenena rehetra an-tongotra
Eny, mila fanahy hizarana ny fiainana
Mifampirehitra afo rehefa lavitra ny morontsiraka
– Ary indray andro any dia hitodika ny lasa isika
Ry namana, mbola nisy ihany ve tamin’izany?
Mitondra anao ho aiza ny tafio-drivotry ny fiainana?
Nitodika izahay nifankahita, very lalana aho!
Mifampijery indray izahay, manantena ny hiafina
Zoro namana milamina, fiaraha-miory!
Mitodika any aoriana aho ary very ny elatra reraka
Zoro namana azo itokisana, tsy dia milalao amin’ny…
Mifampijery indray isika fa aza tora-bato
Aza kapohina aho ry fo maditra
Aza adino, aza adino, aza lavitra
Mamelà ny fotoana mirenireny!
Mamelà ahy, ry namako, andro mangidy
Mihantona aho mba hitazona ny alaheloko
Mamela ny fahafinaretana tsy misy endrika
Ny raiki-pitia amin’ny namana dia levona…
Avy eo dia hisy andro iray, aorian’ny volana tapaka
Mitodika ny lasa isika mba hifampitady
Fitiavana no lazaiko rehefa miova loko ny masoko
Ny tanana maty dia mihazona ela mba hampafana
Nalazo ny fo, nalazo ilay tsiky taloha
Aza very finoana fotsiny
Na dia marefo sy potika aza, dia tsy miraikitra
Miangavy anao indray andro any…
READ Thơ Về Tây Bắc - Chùm Thơ Hay Viết Về Vẻ Đẹp Của Núi Rừng Tây Bắc | Anybook.vn
– Izaho dia ianao ary ho mpinamana mandrakizay ianao
Na dia feno fifandraisana tafahoatra aza ny fotoana
Izaho sy ianao dia tsy manana tolakandron’ny orana
Na manina rehefa tonga ny rivotry ny fararano
Raha malahelo ianao dia ho eo anilanao aho
Omeo teny roa hozaraina izy
Amin’ny fo sy bedy kely
Mahereza fa aza mitomany foana
Izaho sy ianao ihany no afaka manao izany
Raha sendra voasambotry ny rivotra ny volonao
Aiza no hibedy ny rivotra?
Dia avelao ny tananao hikapoka ny volo malefaka
Tsy hanana na inona na inona intsony izaho sy ianao
Ankoatra ny fisakaizana tsy misy fetra
Raha reraka ianao dia andefaso sms aho
Fa ny sorokao tsy azonao ianteherana
Efa fantatrao ny antony hiantsoanao foana
Amin’ny nofy dia tsy misy dikany ny fitiavana
Namanao aho, aza very amin’ny nofy
Raha manome voninkazo ianao dia aza manome raozy
– Aorian’ny fifaliana sy ny alahelo dia tsy maintsy misaraka
Ry namana, rahoviana indray isika no hihaona?
Lavitra ny lalana mankany amiko
Lava kokoa noho ny sidina ny fiverenany
Io fitiavana nosokiriko teo an-tanako io
Afenina ny tsipika rofia mikoropaka
Aiza ny lalana “fisakaizana”, iza no mahalala!
Tazony ny tananao ary manaova tsipika fiadanana
Any amin’ny toerana lavitra, rehefa tsy misy farany ny ranomandry
Miezaka manafana ny foko aho
Na dia hatsatra aza ny hoditra dia maina ny tanana
Mitsikia amin’ny molotrao mazava
Fa rahampitso, raha mifankahita amiko ianao
Ho hitanao avy hatrany io tsiky tononkalo io
Reko ny afo ato anatiko
Vondrona isan-taona, mamy!
– Raha rahampitso rehefa mihidy ny vavahadin-tsekoly
Ambonin’izany, ny uct.edu.vn dia nanome tononkalo tsara indrindra sy manan-danja indrindra momba ny fisakaizana amin’ny namana. Vakio ireto tononkalo fisakaizana manaraka ireto ary tsarovy ny namanao akaiky indrindra mba hizara ny fitiavanao! Ny fisakaizana dia fahatsapana masina foana, ka raha manana tena namana ianao dia tsara vintana. Misaotra anao nanaraka ny lahatsoratray!
Previous: Cách dùng “chuẩn không cần chỉnh” của best regards khi kết thúc email | Anybook.vn
Next: Điểm mặt top 10 các trường đại học khối c ở Hà Nội chất lượng nhất | Anybook.vn